Ihuenyo na foto | January 2020
Isi Ihuenyo na foto
Nyochaa ndi editọ foto kacha mma maka Windows
Ndị editọ foto dịgasị iche maka PC nwere ike ịkụda onye ọ bụla. Iji nyere gị aka ịchọta ihe ziri ezi, anyị na-enye nchịkọta nkenke nke ndị editọ foto foto dị elu 5 ndị ​​na-ezute mkpa dịgasị iche iche nke onye ọrụ ahụ. Nhọrọ nke nhazi ihe ntanetị Onye nchịkọta akụkọ Photo Movavi bụ usoro ihe dị mfe na-eji ngwa ngwa zuru ezu maka ntanetị foto.
Ntugharị nke foto ochie n'ụlọ
Ndewo O doro anya na onye ọ bụla nọ n'ụlọ ahụ nwere foto ochie (ma eleghị anya, ọbụna ndị agadi), ụfọdụ na-ada mbà, nwee ntụpọ, wdg. Oge na - ewepụta nsogbu ya, ma ọ bụrụ na ịnweghị "ị ga - enweta ya na dijitalụ" (ma ọ bụ ka ị ghara ime ya), mgbe obere oge - foto ndị ahụ nwere ike ịla n'iyi ruo mgbe ebighi ebi (dị mwute).
Otu esi emegharia otutu ihe oyiyi n'otu ugbo (ma obu ihe ubi, bugharia, gbanwee, wdg.)
Ezi ụbọchị. Cheedị ọrụ ahụ: ịkwesịrị bepụ akụkụ nke onyinyo ahụ (dịka ọmụmaatụ, 10 px), wee gbanwee ya, megharịa ya ma chekwaa ya na usoro ọzọ. O yiri ka ọ gaghị esiri ike - meghere onye editọ ọ bụla (ọbụna Paint, nke dị na Windows site na ndabara, ga - eme) ma mee mgbanwe ndị dị mkpa.
Esi mee ihu ScreenShot (nseta ihuenyo) nke ihuenyo na Windows. Kedu ihe ma ọ bụrụ na nseta ihuenyo adaghị?
Ezi ụbọchị! Ezigbo amamihe: ọ dịghị onye ọrụ kọmputa dị otú ahụ nke ọ dịkarịa ala otu ugboro agaghị achọ (maọbụ na ọ gaghị achọ) ka ese foto ahụ! N'ikpeazụ, a na-ewepụ ihuenyo (ma ọ bụ foto ya) n'enweghị enyemaka nke igwefoto - ọ bụ naanị omume ole na ole na Windows (banyere ha n'okpuru na isiokwu). Aha ezi aha nke foto dị otú ahụ bụ ScreenShot (na ụdị Russian - "nseta ihuenyo").
https://termotools.com ig.termotools.com © Ihuenyo na foto 2020